Apple ipad pro (2021) vs ipad pro (2020): ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
အဓိက သတင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်များ Apple iPad Pro (2021) နှင့် iPad Pro (2020): ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Apple iPad Pro (2021) နှင့် iPad Pro (2020): ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
၂၀၂၁ အတွက်အက်ပဲလ်အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်များသည်စင်ပေါ်များ စတင်၍ သူတို့၏ပထမဆုံးပိုင်ရှင်များထံပျံသန်းလာကြသည်။ ဒီတက်ဘလက်တွေဟာများသောအားဖြင့် iPhones လိုနှစ်စဉ်လန်းဆန်းမှုရလေ့ရှိကြတဲ့အတွက် ၂၀၂၀ ခုနှစ်မော်ဒယ်များအပြီးမကြာခင် iPad Pros အသစ်ကိုတွေ့ရတော့အံ့သြမိပါတယ်။
ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာအံ့အားသင့်စရာတော့မရှိပါဘူး။ အမှန်တကယ် spec ဝင်တိုးခဲ့သည်။
iPad Pro (2021) သည် M1 ချစ်ပ်ကြောင့်အကြီးအကျယ်အကြီးအကျယ်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ၁၂.၉ လက်မ iPad Pro (2021) တွင် micro-LED နည်းပညာပါဝင်သည့် Liquid Retina XDR display အသစ်ရှိသည်။ အမြဲတမ်းသွားနေရသောသူများအတွက် 5G ကိုထောက်ပံ့ရန်ဆယ်လူလာမော်ဒယ်များကိုအဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကြီးမားတဲ့မေးခွန်းပါ
သင် 2021 iPad Pro သို့မဟုတ် 2020 iPad Pro ကိုဝယ်သင့်ပါသလား။
အထူးသဖြင့် iPad Pro 2020 ရှိပြီးသားသူများသည်၎င်းတို့၏တက်ဘလက်များသည်အလျင်အမြန်ကုန်သွားပြီ၊ အရိပ်လွှမ်းမိုးလာပြီးကျော်လွန်သွားမည်ကိုအနည်းငယ်စိုးရိမ်ကြလိမ့်မည်။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်ပြောပါရစေ။ iPad Pro (2021) တွင်အချို့သောအဆင့်မြှင့်မှုများရှိသည်။ သို့သော် iPadOS 14 သည်၎င်းကိုထိပုတ်ပါကလုပ်ဆောင်နိုင်သောစွမ်းအားအားလုံးနှင့်အမှန်တကယ်မလုပ်သောကြောင့် iPad Pro (2020) သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောတက်ဘလက်တစ်ခုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ Don & apos; စိတ်မပူပါနဲ့။
တခါ WWDC 2021 ဖြတ်သွားနှင့် Apple ကလာမယ့်အရာကိုကြေငြာခဲ့သည် iPad 15 ... ထို့နောက်စိုးရိမ်ရန်အချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်စောင့်ကြည့်ရ ဦး မယ်။
iPad အဟောင်းမှအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း ဒါမှမဟုတ်ပထမဆုံးစူပါပါဝါတက်ဘလက်ကိုဝယ်ချင်နေလား။ iPad Pro အသစ် (၂၀၂၁) မော်ဒယ်များသည်သင်၌၎င်းတို့အတွက်ငွေရှိပါကဝယ်ယူမှုတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ မဟုတ်ပါက၊ သင်ဟာလျှော့စျေး ၂၀၂၀ မော်ဒယ်များကိုရှာဖွေနိုင်သည် - အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ၎င်းတို့တွင်ဖျော်ရည်များရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်မချခင် (ဇွန် ၇ ရက်) WWDC (စောင့်ဆိုင်းရန်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါက) အတည်ပြုရန်စောင့်ပါ။
Apple iPad Pro ၁၁ လက်မ (၂၀၂၁)
- preပြီလ ၃၀ ရက်၊
$ 799Apple မှာဝယ်ပါ
Apple iPad Pro ၁၁ လက်မ (၂၀၂၀)
$ 100 off (13%)$ 699၉၉$ 799၉၉ BestBuy တွင် ၀ ယ်ပါ
Apple iPad Pro ၁၂.၉ လက်မ (၂၀၂၁)
- ordersပြီလ ၃၀ ရက်တွင်ကြိုတင်အမှာစာစတင်မည်
$ 1099Apple မှာဝယ်ပါ
Apple iPad Pro ၁၂.၉ လက်မ (၂၀၂၀)
$ 100 off (၁၀%)$ 899၉၉$ 999၉၉ BestBuy တွင် ၀ ယ်ပါပိုကောင်းတဲ့ရေငုပ်တာကိုခွင့်ပြုပါ
iPad Pro (2021) နှင့် iPad Pro (2020) display နှင့် design
ဒီဇိုင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ဘာမျှအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်။ အက်ပဲလ်ဟာအိုင်ပက်ပရိုလိုင်းရဲ့ 'အသစ်' (၂၀၁၈ ခုနှစ်ခန့်တွင်) စက်မှုဇုံပုံစံ (ယခုတွင်လည်းအိုင်ပက်ဒ်4သို့ဆင်းသွားသည်) ကိုစွဲကိုင်ထားသည်။ ၎င်းအတွက်တော်တော်လေးစျေးကြီးတဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ (* ahem * Magic Keyboard) ကိုလည်းရောင်းချတဲ့အတွက်အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့ကို iPad အသစ်များနှင့်အသုံးပြုနိုင်ဆဲကိုသိရသည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ iPad Pro 12.9 (2021) သည်ယခုအချိန်တွင် iPad Pro 12.9 (2020) ထက်အနည်းငယ်ပိုထူသည်။ ၎င်းသည် Magic Keyboard အမှု၌အသေးစားမထိုက်မတန်သောကိစ္စများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒါပေမယ့်သေချာတာပေါ့၊ သင် Magic Keyboard အဟောင်းကို iPad Pro 12.9 အသစ်နှင့်အတူအသုံးပြုနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ ထိုခတ်ကိုပိတ်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်ပိုမိုတင်းကျပ်ပြီး၎င်းအားကောင်းမွန်စွာမတပ်ဆင်ထားဟုခံစားရခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။ ; t) ။
ဘယ်ဘက်ရှိ ၂၀၂၁ မော်ဒယ်တက်ဘလက်၏အသွင်အပြင်သို့ပြန်သွားရန် - အသစ်အဆန်းတော့မဟုတ်ပါ - ၎င်းသည် - မျက်နှာပြင်အားလုံးစတုဂံလေးထောင့်ဖြင့်ထောင့်မှန်စတုဂံပုံသဏ္sာန်အပြင်ဘက်တွင်နေရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ နောက်ကျောဘက်မှာတော့ကျွန်ပ်တို့ရဲ့ကင်မရာမော်ဂျူးမှာ ၂၀၂၀ iPad Pros တွေလိုပါပဲ။ ပြီးတော့အောက်ဘက်နားကသုံးပွင့်ရှိ Smart Connector ပါ။ အထက်ဖော်ပြပါဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ဆက်၍ ကပ်ရန်အတွက်သစ်သားပြားများသည်သံလိုက်များနှင့်ပြည့်နေကြောင်းသင်စိတ်ချနိုင်သည်။
ဘယ်ဘက်ရှိ ၂၀၂၁ မော်ဒယ်မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးအရ၊ iPad Pro 11 (2021) သည်ယခင်အရင်ကဲ့သို့ပင်တူညီသည်။ တော်တော်လေးတိကျသောအရောင်များနှင့်ချွန်ထက်သောရုပ်ပုံများပါသော 120 Hz LCD panel တစ်ခု - အလွန်ကောင်းသည်။ ယနေ့ခေတ်အိုင်ပက်ဖန်သားပြင်များကိုကျွန်ုပ်အလွန်နှစ်သက်သောတစ်ခုတည်းသောအရာမှာ၎င်းတို့သည် oleophobic coating ဖြစ်သည်။ Apple Pencil2သည်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးလိုအပ်သောကြောင့်သင်၏ iPad Pro သည်လက်ဗွေများဖြင့်စိမ့်ဝင်လာခြင်းကိုပိုမိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ထိုသူတို့ကအရမ်းချွတ်ရှင်းလင်းဖို့အများကြီးပိုခက်ခဲဖြစ်ကြသည်။
iPad Pro 12.9 (2021) သည်အထူးသဖြင့်မျက်နှာပြင်နည်းပညာကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Apple Pro Display XDR ၏အလွန်သေးငယ်သောဗားရှင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ် Mac Pro နှင့်အတူစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောကြီးမားပြီးလှပပြီးစျေးကြီးသည့်ပြင်ပမော်နီတာဖြစ်သည်။
iPad Pro 12.9 ပေါ်ရှိမျက်နှာပြင်ကို Liquid Retina XDR ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည် ၁၂၀ Hz Refresh Rate ရှိပြီး 1600 NIT အထွတ်အထိပ်တောက်ပမှုနှင့် ၁ သန်းမှ ၁ အကြားခြားနားမှုအချိုးအစားရှိသည်။ Apple ကဒီနည်းပညာကိုအသစ်စက်စက်နည်းပညာအသစ် mini-LED panel ကိုအသုံးပြုပြီးစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းမှာရောက်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်တကယ့်ကိုတကယ့်ကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီးကြည့်စရာကောင်းသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့တိုင်၊ Liquid Retina XDR သည် iPad Pro 12.9 (2021) သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်သင်၏အဓိကအကြောင်းရင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သင့်သည်ကိုသေချာမသိရသေးပါ။
mini-LED နဲ့ LCD တို့ရဲ့ကွာခြားချက်ကဘာလဲ။
LCD ရှိတယ်၊ OLED လည်းရှိတယ်။ ယခင်သည် LCD အလွှာအလွှာကိုလင်းစေရန် LED-powered backlighting ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် OLED panel သည်သန်းပေါင်းများစွာသောအော်ဂဲနစ် LED များကိုအသုံးပြုသည်။ အခြေခံအားဖြင့်ဖန်သားပြင်ရှိ pixel တစ်ခုစီသည်၎င်း၏အလင်းနှင့်အရောင်ကိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့် backlight မလိုအပ်ပေ။
OLED panel များသည် LCDs များထက်သာလွန်သည်ဟုဆိုကြပြီး၎င်းတို့သည်စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့် ၄ င်းတို့၏အနက်ရောင်အရောင်များသည်အမှန်တကယ်ရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အနက်ရောင်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော LEDs များသည်ရိုးရှင်းစွာပိတ်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည် 'အဆုံးမဲ့' ဆန့်ကျင်ဘက်ရှိသည်ဟုပြောခြင်းသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
Mini-LED သည်ထိုနှစ်ခုကြားတွင်ရှိသည်။ ၎င်းသည် backlight နည်းပညာဟောင်းဖြစ်သော်လည်း LCD substrat layer ၏နောက်ကွယ်ရှိ illumination panel သည် ၀.၂ မီလီမီတာသို့မဟုတ်ထိုထက်ငယ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ backlight သည်ကဏ္smallများစွာတွင်ကွဲပြားပြီးမျက်နှာပြင်၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုထွန်းလင်းသောအခါပိုမိုကောင်းမွန်သောထိန်းချုပ်မှုနှင့်တိကျမှုကိုခွင့်ပြုသည်။ အမှန်ကတော့သူက OLED panel တစ်ခုလိုမျိုး LCD panel တစ်ခုကိုဖန်တီးတယ်။
mini-LEDs ၁၀,၀၀၀ ကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကဏ္sectorsများအဖြစ်ခွဲထုတ်လိုက်တယ်။ ဒီနည်းပညာဖြင့် iPad Pro 12.9 (2021) ကသာလွန်ထူးခြားမှုကိုပေးစွမ်းပြီး Apple ကအရောင်တိကျမှန်ကန်မှုကိုဝါကြွားခဲ့သည်။
တကယ်တော့ ၂၀၂၀ iPad & apos; s မျက်နှာပြင်သည်အံ့ already စရာကောင်းနေသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူ့လူမည်းတွေဟာမီးခိုးရောင်အနီရောင်တွေဖြစ်ကြတယ်၊ နောက်ခံအလင်းဟာအမြဲတမ်းဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာ၊ နိုက်ထရိုက်အမြင့်ဆုံး 1,600 ထိထိသွားတယ်။ ဒီတော့အဲဒါဟာအကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူကအရမ်းကောင်းပါတယ်။
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်အီး rgbcmy အောက်ပိုင်းကပိုကောင်းတယ်
(ထူးကဲ) ၁: ၁၉၇၁
(ထူးကဲ) ၁: ၁၇၈၀
CIE 1931 xy color gamut ဇယားသည် display ကိုပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သည့်အရောင် (areaရိယာ) ကိုကိုယ်စားပြုပြီး sRGB colorspace (ထိုမီးမောင်းထိုးထားသောတြိဂံ) ကိုရည်ညွှန်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ဇယားသည်ဖော်ပြချက်တစ်ခု၏အရောင်တိကျမှန်ကန်မှုကိုအမြင်အာရုံဖြင့်ဖော်ပြသည်။ တြိဂံနယ်နိမိတ်အနှံ့ရှိရင်ပြင်ငယ်များသည်အရောင်အမျိုးမျိုးအတွက်ရည်ညွှန်းချက်ဖြစ်ပြီးအစက်ငယ်များသည်အမှန်တကယ်တိုင်းတာမှုများဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးကတော့, အစက်တစ်ခုစီသည်၎င်း၏သက်ဆိုင်ရာစတုရန်းအထက်တွင်ထားသင့်သည်။ ဇယားအောက်ရှိဇယားရှိ 'x: CIE31' နှင့် 'y: CIE31' တန်ဖိုးများသည်ဇယားပေါ်တွင်တိုင်းတာခြင်းတစ်ခုစီ၏အနေအထားကိုဖော်ပြသည်။ 'Y' သည်တိုင်းတာထားသောအရောင်တစ်ခုစီ၏တောက်ပမှုကိုပြသည်။ 'Target Y' သည်ထိုအရောင်အတွက်လိုချင်သောတောက်ပမှုအဆင့်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် '2000E 2000' သည်တိုင်းတာထားသည့်အရောင်၏ Delta E တန်ဖိုးဖြစ်သည်။ Delta E တန်ဖိုးသည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတန်ဖိုး ၂ ဖြစ်သည်။
ဤရွေ့ကားတိုင်းတာသုံးပြီးလုပ်နေကြသည် Portrait Displays 'CalMAN calibration software ။
အရောင်တိကျမှန်ကန်မှုပြဇယားတွင်ဖော်ပြထားသောအရောင်များသည်၎င်းတို့၏ရည်ညွှန်းတန်ဖိုးများနှင့်မည်မျှနီးကပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ပထမလိုင်းတွင်တိုင်းတာထားသော (အမှန်တကယ်) အရောင်များရှိပြီးဒုတိယမျဉ်းတွင်ရည်ညွှန်း (ပစ်မှတ်) အရောင်များကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ တကယ့်အရောင်တွေနီးကပ်လေလေ၊
Grayscale တိကျမှန်ကန်မှုပြဇယားတွင်ပြသထားသည့်အဖြူရောင်ချိန်ခွင်လျှာ (အနီရောင်၊ အစိမ်းနှင့်အပြာအကြားချိန်ခွင်လျှာ) မှန်ကန်မှုရှိမရှိပြသသည် (မှောင်မှအပြာသို့) ကွဲပြားသောမီးခိုးရောင်အဆင့်များ၌ပြသသည်။ Actual အရောင်များသည် Target များနှင့်နီးလေလေပိုကောင်းလေလေဖြစ်သည်။
iPad Pro (2021) နှင့် iPad Pro (2020) ပရိုဆက်ဆာနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှောင်းပိုင်းမှာ Apple ကသူ့ရဲ့ Mac1 အတွက် Mac1 Air, Pro နှင့် Mac mini အတွက် M1 chip အသစ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ iPad Pro (2021) ကြေငြာချက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှမပြောခဲ့ကြတာက ၁၁ လက်မနဲ့ ၁၂.၉ လက်မအမျိုးအစားနှစ်ခုလုံးက M1 က iPad Pros ဆီကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိနေပြီဆိုတာပါပဲ။
အဘယ်အရာ & apos; ကြီးတွေသဘောတူညီချက်? ကောင်းပြီ, M1 အလွန်အစွမ်းထက်သည်နှင့်အလွန်, အလွန်စွမ်းအင်ထိရောက်သည်။ ဒါ့အပြင်အေးမြတယ်။ တင်ဆက်မှုမှာအက်ပဲလ်ကအက်ပဲလ်ဟာ ၁၂၂၁ အက်ပဲလ်ပရိုဆက်ဆာနဲ့ iPad Pro (၂၀၂၁) ထက် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းပိုမြန်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သော်လည်း, ထို & apos; s ကိုစံပြအခြေအနေများအတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။ Benchmarks ကထိုအရေအတွက်သည် ၃၀% ခန့်ရှိသည်ဟုဆိုသော်လည်း၎င်းသည်အလွန်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည်။ ဂရပ်ဖစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းသိသိသာသာတိုးတက်လာသည်။
၂၀၂၀ iPad Pros များသည်ခေတ်ကုန်ပြီလား။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က iPad Pro ကို ၀ ယ်ယူခြင်းကြောင့်သင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ tablet နှစ်ခုလုံးသည် GFX Bench စမ်းသပ်မှုများစွာကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်သော်လည်း၊ ငါပြောစရာရှိသည် - iPad Pro 2021 သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များထွက်ပေါ်လာသည်။ ၎င်းသည်၎င်းသည်၎င်း၏ယခင်ထက်စံသတ်မှတ်ချက်များကိုစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်နောက်တစ်ဆင့်သို့ခုန်ကူးခြင်းတွင်အထင်အရှားပိုမိုမြန်ဆန်သည် နောက်သို့
iPad Pro 2021 iPad Pro 2020 ၎င်းသည်သင်ပျောက်ဆုံးနေသည်ဟုခံစားရရန်ခက်ခဲသည်။ ဒါပေမယ့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါရစေ၊ လက်ရှိအခြေအနေမှာ iPadOS ဟာ ၂၀၂၀ Apple A12Z ပရိုဆက်ဆာကိုအသုံးမပြုနိုင်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်အသုံးပြုမှုအများဆုံးကိစ္စများတွင် M1 အသစ်ကိုသေချာစွာအသုံးမပြုခြင်းဖြစ်သည်။
I & apos; iPad Pro 11 (2020) ကိုတစ်နှစ်လုံးအစဉ်တစိုက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အရာရာကိုဖြတ်သန်းသွားသည်၊ browsing, play, article ဆောင်းပါးရေးခြင်း၊ image editing အတွက်အထူးသင့်တော်သည်။ ဂီတရေးခြင်း , နှင့်အခြားအလင်းနှင့်မ - ဒါ - အလင်းကွန်ပျူတာပစ္စည်းပစ္စယ။
အကယ်၍ သင်သည် RAW ပုံများတည်းဖြတ်ခြင်း၊ အမြောက်အမြားတင်ပို့ခြင်းသို့မဟုတ် 4K ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ခြင်းစသည့်လေးလံသောအရာများကိုလုပ်ဆောင်နေပါကထို M1 ပရိုဆက်ဆာနှင့် ၃၀% မြန်နှုန်းတိုးမြှင့်မှုမှသင်အကျိုးကျေးဇူးရရှိလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် M1 မှတစ်ဆင့် iPad Pros အသစ်ရှိ USB Type-C port သည် Thunderbolt3port တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်တစ်စက္ကန့်လျှင် 40 gigabits အမြန်နှုန်းကိုထောက်ပံ့သည် (ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က USB Type-C port သည်တစ်စက္ကန့်လျှင် 10 gigabits) ကိုထောက်ပံ့သည်။ တနည်းကား - အကယ်၍ သင်သည် အကယ်၍ သင်သည် 4K ဗီဒီယိုနှင့်ကြီးမားသောရုပ်ပုံဖိုင်များကို၎င်းတို့၏ iPad ပေါ်တွင်အဆက်မပြတ်ချထားသည့်ပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်အဓိပ္ပါယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း၊ iPad Pro (2020) သည်ထိုအရာများနှင့်တော်တော်လေးကောင်းမွန်သည်။ အကယ်၍ မင်းသည်သင်၏လုပ်ငန်းအသွားအလာကိုမြန်နှုန်းမြှင့်တင်ရန်မလိုအပ်ပါကသင်၏ Apple စတိုးသို့အလျင်အမြန်မြန်ပြီး ASAP ကိုအဆင့်မြှင့်ရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်မခံစားရပါ။
အနည်းဆုံးတော့ယခုအချိန်အထိတော့မရှိသေးပါ။ iPadOS 15 နှင့်ဘာတွေမျှော်လင့်နိုင်မည်လဲဟူသောမေးခွန်းပင်ဖြစ်သည်။
ဒီနှစ်မှာအက်ပဲလ်ဟာအိုင်ပက်ဒ်အက်ပ်ကိုမွမ်းမံမှုအသစ်တွေလုပ်မယ်လို့ပြောနေတယ် & apos; s WWDC (ဇွန် ၇ ရက်တွင်) ။ အချို့သောအကောင်းမြင်ဆန်သောပေါက်ကြားမှုများနှင့်ထင်မြင်ယူဆချက်များက iPad အတွက် Final Cut Pro ကိုမြင်နိုင်သည်။
ဒါပေမယ့်နောက်တစ်ခါမှာ Apple က M1 ကို iPad Pro အသစ်မှာဘာကြောင့်ထည့်မှာလဲ။ အဘယ်ကြောင့်အခြားအနိမ့်ဆင့်များအတွက် RAM ကို 8 GB အထိနှင့်မြင့်မားတဲ့ tier များအတွက်စိတ်ကို -goggling 16 GB ကိုတိုးမြှင့်မလဲ
ဟုတ်ပါတယ်၊ အခုကိစ္စတစ်ခုပါပဲ။ အက်ပဲလ်ဟာအိုင်ပက်ဒ်အသစ်ရဲ့ RAM စွမ်းရည်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် Cupertino သည် iPads (အနည်းဆုံး Pros) များကိုကွန်ပြူတာများနှင့်မိုဘိုင်း gadget များကဲ့သို့ပိုမိုဆက်ဆံရန်ပုံရသည်။ ဒါက apos; s ကိုကြီးမြတ်! WWDC ကကြေငြာလိုက်တဲ့အဆင့်မြှင့်မှုများဟာ ၂၀၂၀ iPad Pro ကိုသူတို့ရဲ့ ၆ GB GB RAM မော်ဒယ်များနဲ့သက်တမ်းကုန်သွားမှာလား။ ငါသေချာတာကတော့မျှော်လင့်မထားပေမယ့်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာသူတို့ဘာတွေရှိလာမလဲဆိုတာကိုမတတ်နိုင်ကြဘူး။
Apple iPad Pro ၁၁ လက်မ (၂၀၂၁) 1574
Apple iPad Pro ၁၁ လက်မ (၂၀၂၀) 1122
Apple iPad Pro ၁၁ လက်မ (၂၀၂၁) 5877
Apple iPad Pro ၁၁ လက်မ (၂၀၂၀) 4690
Apple iPad Pro ၁၁ လက်မ (၂၀၂၁) 211,199
Apple iPad Pro ၁၁ လက်မ (၂၀၂၀) 127,456
iPad Pro (2021) နှင့် iPad Pro (2020) ကင်မရာ
iPad Pro ရဲ့ကင်မရာအသစ်ကကွာခြားလား။ နောက်ကျောဘက်မှာတော့အတူတူပါပဲ၊ 12 MP ကျယ်ပြန့်သောကင်မရာနှင့် 10 MP Ultra-wide ကင်မရာ၊ LiDAR အာရုံခံကိရိယာနှင့် real-time Augmented Reality မှော်စွမ်းရည်။ ၂၀၂၀ နှင့် ၂၀၂၁ နှစ်မျိုးလုံးတွင် iPad များ၌ဤသတ်မှတ်ချက်များရှိသည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ ပုံရိပ်တွေကစာရွက်စာတမ်းတွေကိုစကင်ဖတ်တာ၊ ရံဖန်ရံခါရုပ်ပုံတွေမျှဝေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲလူအများစုကအိုင်ပက်ဒ်ကိုအကြီးအကျယ်လှုပ်ခတ်နေခြင်းမဟုတ်ဘဲဓာတ်ပုံများရိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်လား ဟုတ်လား
ကောင်းပြီ၊ သင်လုပ်ခဲ့လျှင် iPad Pros နှင့်ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံများသည်တော်တော်လှသည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ - သူတို့က iPhone 11 Pro နှင့်တန်းတူဖြစ်သည်။
သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ 'ပုံမှန် mode' တွင်ထို ultra-wide selfie ကင်မရာကိုအသုံးပြုသောအခါအရည်အသွေးကျဆင်းသည်။ iPad Pro 2020 &7MP selfie ကင်မရာသည်ပိုမိုပြတ်သားသောပုံရိပ်ကိုထုတ်ပေးသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ iPad Pro 2021 ဟာသာမာန်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်ဖို့ဒီဂျစ်တယ်ချဲ့ရန်လိုအပ်တယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သိသာထင်ရှားသည့်ပိုကောင်းသည့် selfie ကိုရရှိသည်။
iPad Pro 2021 selfie ကင်မရာရှိ 'wide angle' option ကိုထိုးနှက်သောအခါဤအရာသည်သင်ရရှိသည်။
iPad Pro 2021 Ultra-wide selfie ကင်မရာ
အဲဒီမှာဒီကျယ်ပြန့်တဲ့ဒီမှန်ဘီလူးအတွက်အကြောင်းပြချက် - အက်ပဲလ်ကဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအင်္ဂါရပ်အသစ်ကိုယူဆောင်လာရန်အက်ဗ်အက်သည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော FOV ကိုအသုံးပြုနေသည် ၎င်းကို Center Stage ဟုခေါ်ပြီး၎င်းသည်သင့်အားကင်မရာကိုခြေရာခံရန်ခွင့်ပြုသည်။
ကြည့်ရှုပါ၊ စင်တာဖွင့်ထားပါကခေါ်ဆိုသူသည်သင်၏ selfie ကင်မရာ၏အပြည့်အဝကိုမတွေ့ပါ။ သင်၏မျက်နှာကိုခြေရာခံသည့်ချဲ့ထားသည့်ဗားရှင်းကိုသူတို့မြင်ကြသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ယိုယွင်းခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်အမင်းအတုများမဟုတ်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အမှန်တကယ်အလွန်ချောမွေ့သည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အော်ပရေတာသည်သင်၏မျက်နှာကိုသဘာဝကျကျအတိုင်းလိုက်နာသည့်ပုံစံမျိုးဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်သင်တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်ဖုန်းခေါ်မည်ဆိုလျှင်သင် iPad ကိုသံသယဖြစ်စရာမလို - သင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်ပြီးကင်မရာကသင့်ကိုခြေရာခံလိမ့်မည်။ အခြားသူတစ် ဦး ဦး ကကင်မရာမြင်ကွင်းသို့ဝင်လျှင်၎င်းသည်မျက်နှာအသစ်ရှိကြောင်းနှင့်သင်နှစ်ခုလုံးကိုရိုက်ချက်တွင်ချုံ့ရန်ချုံ့လိမ့်မည်။ ဤတွင်အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသောဤအရာသည် FaceTime ၏သီးသန့်လုပ်ဆောင်ချက်မဟုတ်ပါ။ တတိယပါတီမှလူကြိုက်များသော video-conferencing app အားလုံးအတွက်အမှန်တကယ်ဖွင့်သည်။
အရမ်းသဘောကောင်းတာပဲ။ ငါကအဲဒါကိုအရောင်းအ ၀ ယ်လို့မခေါ်ဘူး၊ ဗွီဒီယိုစကားပြောနေတုန်းအခန်းထဲမှာငါလမ်းလျှောက်နေတာနောက်ဆုံးအကြိမ်ဘယ်တော့မှမမှတ်မိဘူး။ သို့သော်၎င်းတွင်ရှိခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောဆုလက်ဆောင်လက္ခဏာဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အမှန်တကယ်တည်ရှိရန်သဘာဝကျသည်။
ကောင်းပြီ၊ ပတ် ၀ န်းကျင်မရှိ - 2021 ထုတ်ဝေသောဆယ်လူလာ iPad Pro သည် 5G ဆက်သွယ်မှုရှိသည်။ အဆိုပါ 2020 doesn & apos; t ကို။ ရိုးရှင်းပါတယ် ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာကအင်တင်နာအသစ်တွေကသင့်အတွက်ပိုကုန်ကျမှာပါ။ ဆယ်လူလာ iPad Pro မော်ဒယ်လ်ကိုရပြီဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ ၂၀၀ ထပ်ပေးရမယ်။ iPad Pro (၂၀၂၀) အတွက်ဆယ်လူလာမော်ဒယ်ကဒေါ်လာ ၁၅၀ သာဈေးတက်ခဲ့တယ်။
သို့သော်သင်၏ iPad ပေါ်တွင်ဆယ်လူလာလိုအပ်ပါသလား။
iPad Pro (2021) နှင့် iPad Pro (2020) Apple Pencil, Magic Keyboard နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Apple သည် iPad ကို laptop တစ်လုံးကဲ့သို့အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသော်လည်းကုန်ထုတ်စွမ်းအားအနည်းငယ်ကိုအာရုံစူးစိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်မှကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အိုင်ပက်ဒ်ကိုလုပ်ရန်ခဏတာကြိုးစားနေသည်။ ထို့ကြောင့် Apple Pencil၊ Smart Keyboard နှင့်နောက်ပိုင်းတွင် Magic Keyboard တို့ကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။
Magic Keyboard သည် iPad Pro (2021) နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါသလား။ Apple Pencil2သည် iPad Pro (2021) နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါသလား။
မိမိတို့သည်မိမိကိုယ်ကို Magic Keyboard နှင့် Apple Pencil2ဝယ်ယူသူများအတွက် iPad Pro (2021) က၎င်းတို့အားအပြည့်အဝထောက်ခံလိမ့်မည်ဟုသင်သိရ။ ၀ မ်းသာပါလိမ့်မည်။ trackpad ကို mouse pointer အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ဆဲဖြစ်သော်လည်း Pencil2သည် iPad မှသံလိုက်ကြိုးများနှင့်အားသွင်းထားဆဲဖြစ်သည်။ iPad Pro 12.9 (2021) သည်အထူးသဖြင့် Magic Keyboard ၏ယခင်ဗားရှင်းနှင့်အနည်းငယ်ကိုက်ညီမှုရှိလိမ့်မည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်တက်ဘလက်အသစ်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထက် ၀.၅ မီလီမီတာပိုထူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကြီးမားတဲ့သဘောတူညီမှုတော့မဟုတ်ပါ (တွစ်တာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းမကြီးမားပါ။ ) သို့သော်တင်းကျပ်စွာကိုက်ညီမှုကြောင့် iPad & apos; s မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအမှတ်အသားများကိုချန်ထားသည့်သော့များကိုကျွန်ုပ်သတိပြုမိပါလိမ့်မည် (ahem, MacBook Pro ... ) ။
အပိုပစ္စည်းအသစ်များကိုကြေငြာခြင်းမရှိသော်လည်း iPad Pro (2021) သည် USB Type-C port နှင့်ပါ ၀ င်သည်မှာမှတ်သားထိုက်သည်။ အကယ်၍ သင်ဟာ ၂၀၂၀ ဗားရှင်းအတွက်တတိယပါတီဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် adapter အချို့ကို ၀ ယ်ခဲ့ရင်သူတို့အလုပ်လုပ်မှာပါ။ အကယ်၍ သင်သည် Non-Pro iPad (သို့မဟုတ် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မတိုင်မီက iPad Pro) မှအဆင့်မြှင့်ပါကသင်၏အကြိုက်ဆုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် dongles များအတွက် Lightning connector မရှိကြောင်းသတိပြုပါ။ ၎င်းသည်သင့်အတွက် USB Type-C သို့ပြောင်းခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
oneplus3verizon အပေါ်အလုပ်လုပ်သည်
မှာ & t ကို vs verizon prepaid
java ၌ json ဖိုင်ကိုဖတ်နေ
Apple ကပျက်စီးသွားသော iPhone6Plus ယူနစ်များကိုမတ်လအထိ iPhone 6s Plus ဖြင့်အစားထိုးမည်
Python Data အမျိုးအစားများနှင့်အမျိုးအစားကူးပြောင်းခြင်း
Apple Upgrade အစီအစဉ်အဖွဲ့ဝင်များသည် 5G iPhone 12 mini သို့မဟုတ် iPhone 12 Pro Max ကိုဝယ်ရန်ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်
Moto X Style နှင့် Samsung Galaxy S6 vs LG G4: သတ်မှတ်ချက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်
iPhone7မှာရှိတဲ့ Home Home ခလုတ်ကို Apple ဖယ်ရှားရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိတယ်
Samsung Galaxy Buds + နှင့် AirPods Pro၊ AirPods၊ Jabra Elite Active 75t တို့ဖြစ်သည်
Facebook Messenger Lite update တွင်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်အချို့ထည့်သွင်းထားသည်
အကောင်းဆုံး iPhone 5s အိတ်များနှင့်အဖုံးများ
Android TV အတွက် Amazon Prime Video ကိုမကြာမီအချိန်မရွေးကျယ်ပြန့်စွာရရှိနိုင်လိမ့်မည်
JMeter's JSON Extractor ကို အသုံးပြု၍ JSON တုံ့ပြန်မှုကိုမည်သို့ခွဲခြားမည်နည်း